Tourism Seychelles uye Emirates ndege inotanga kushambadzira kudyidzana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Tourism Seychelles uye Emirates ndege inotanga kushambadzira kudyidzana
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Seychelles uye Emirates kubatana
Tourism Seychelles yatanga hukama hwekudyidzana neEmirates ndege, akavimbika mudiwa uye mushandirwi, uye ndege yekutanga yenyika dzese kudzoka kuchitsuwa pakuvhurwa kwekuenda muna Nyamavhuvhu 2020.
Seychelles yakagamuchira vanopfuura 15,000 vashanyi vanobva kuUAE kusvika ikozvino gore rino.
Matanho ekuchengetedza uye zvirevo zvakatwasanuka zvakagadzirirwa kugonesa kufamba pakati penzvimbo.
Emirates inoshanda nendege nomwe pasvondo kuenda kuSeychelles kubva kuDubai uye ndiyo yechipiri inotungamira musika kunobva zviwi.
Kubatana uku kuchabatanidza nhevedzano yemakampeni ane chinangwa chekuunza Seychelles Islands seyakanyanya kutaridzika senzvimbo yekuzorora yekupedzisira mukati meKubatanidzwa Kanzuru yemusika weArab States yeGulf (GCC) kuburikidza nezvakabatanidzwa zvine chekuita neSeychelles izvo zvichave zvichionekwa paEmirates 'zvemagariro. mapuratifomu mapuratifomu pamwe nekushambadzira kweemail uye nhepfenyuro dzakabatana.
Kubatana kuchaita kuti vashanyi vazive parizvino neruzivo nezvekufamba kwezvitsuwa, izvo zvakagashira vanopfuura 15,000 vashanyi kubva kuUAE kusvika zvino gore rino uye iyo, Svondo, Nyamavhuvhu 29, 2021, inomira semusika wechipiri unotungamira sosi kune kwairi kuenda .
Zvakare, mishandirapamwe iyi ichasimbisa hukama hwekutengeserana nekufamba pamwe nekusimudzira ruzivo rwechigadzirwa kuburikidza nepamhepo zvekudzidzisa uye mashopu pamwe nerwendo rwekujairisa, rwakatarisana nenzvimbo dzine miganhu ikozvino yazarukira mafambiro.
Kuchengeta kuchengetedzeka pamwoyo we kuenda kuSychelles, kubatana kwacho kucharatidzawo rwendo rwekubva kuDubai kuenda kuchitsuwa nyika, kusanganisira zvakakosha zvakadai senzira dzekuchengetedza uye zvirevo zvakanangana zvakagadzirirwa kugadzirisa kufamba. Mukuwedzera, vaenzi vachakwanisa tsvaga izvo Seychelles Islands dzakachengetera kwavari vasati vatombomhara pamahombekombe ayo ejecha.
Vachitaura nezvekubatana uku, Secretary of Secretary for Tourism, Mai Sherin Francis, vakati, "Kubatana neEmirates ndokwekukura kubva pasimba kuenda kusimba, uye tinofara nerutsigiro rwavakawedzera kusvika nekwavaenda uye Tourism Seychelles pamusoro pe gore. Kubatana kwegore rino hakuna kusiyana. Nekudaro, mune nguva iyo indasitiri yedu iri kupora zvishoma nezvishoma uye uko kuvaka kwekuvimba kwekufamba kuchikosha kwazvo, kudyidzana senge iyi kune chirevo chitsva nedudziro. Kuburikidza nebasa iri rekushandira pamwe, uchave muhwina kune vese nendege nekuenda. ”
NeEmirates iri kushanda nendege nomwe pasvondo kuenda kuSeychelles kubva kuDubai, nyika dzeUAE nevagari vanogona ikozvino kuronga nzira yekunze yekuenda kunzvimbo yemvura inonaya, pearly shores uye emerald makomo, vachisarudza kubva kune imwe yemahotera mazhinji emahotera kana dzimba dzinoyevedza dzekugara kwavo. .
Kupinda kuSychelles kunoda humbowo hweyakaipa COVID-19 bvunzo, inoitiswa mukati maawa makumi maviri nemaviri kubva pazuva rekufamba uye kubvumidzwa kubva kuhutano Hwokufambisa Mvumo app. Rumwe ruzivo nezve kufamba kuenda kuchitsuwa paradhiso runogona kuwanikwa ku 'seychelles.advisory.travel.'
Svondo 25, 2021 pa 05: 24
Isu tinoziva, Emirates Airline yakawedzera chibvumirano chekushambadzira pasirese neSeychelles. COVID-19 yekuedzwa inodikanwa, kuenda nekubva kuDubai, kugara wakachengeteka, uye edu akasununguka tikiti sarudzo.